Programmer's Diary: ဗယ်လင်တိုင်းဒေး အမှတ်တရ
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:22 AM
Love is.............. what you mean to me - and you mean everything to me. Thank you for loving me....
ညီညီနဲ့ပိုး .. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒီထက်ပိုပြီး နားလည်မှု့ တွေ့ ရလို့ ... ဘ၀ခရီးကို နှစ်ယောက်အတူ ထာဝရ အမြဲ လက်တွဲကာ၊ ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
February 14, 2007 5:28 PM
နားလည်ပါ..ကိုယ်ချင်းစာပါ.. အမှားတွေ့ရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ.. ညှိနှိုင်းပါ.. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားပါ..
အေးမြတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ခိုင်မြဲပါစေ.. ဟဲ..ဟဲ.. ဆုတောင်းပေးတာ.. ဗြဟ်မစိုရ်တရားဟောနေတာနဲ့တူနေတယ်..ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ..
February 15, 2007 12:24 AM
May you two be loving each other till the end of the time by cherishing the happy moments and understanding each other's weakness!
March 06, 2007 10:55 AM